Ashine R&D nzvimbo yakazvipira kukuya uye kupukuta tekinoroji uye inoshanda pamwe neSichuan University, Xiamen University, uye mapurofesa anobva kuUnited States. Naizvozvi, Ashine anokwanisa kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakatsiga uye ane kugona kuri nani kwehunyanzvi hunyanzvi kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana ekukuya pasi uye kupora kwevatengi.
Needu akakosha epakati kukosha kweyakaenderana mhando chigadzirwa, kuvimba uye kuvimbika nevamwe vedu, uye yedu yakasimba R&D uye zvigadzirwa, isu tinotarisira nemoyo wese kuramba tichishanda nekusunga hukama hwedu hwekudyidzana nevatinoshanda navo pasi rese.
Ashine anomira kunze muiyi indasitiri nemhando yepamusoro yekushandisa, uye yedu R & D timu inoona Ashine aine kugona kutaura kunze nechigadzirwa chaicho. R & D timu reAshine rinoumba hwakasimba hwekuvandudza hwaro hwekambani kuratidza kuenderana pakati pezvigadzirwa, musika maitiro, uye mutengi zvinodiwa.
Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Concrete vachikuya Shoes, Diamond Kwayedza Bhutsu, PCD Kukuya Shangu, Concrete makorari Mapedhi,